Baaritaanka Carruurnimada Hore | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxbarshada Beesha Minnetonka
Ku xayaysiinta MCE
Kaataloogyada hadda jira
Kirada Meesha MCE
Waxaan nahay Minnetonka Beesha Ed
Dhismaha Isugeynta 2020
Sahamiyayaashu Hadda Waa Shaqaaleeyaan
Sahamiyayaal - Fasallada K-5
Jr. Sahamiyayaal - Da'da 3-5
Diiwaangelinta & Khidmadaha
Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFE)
Baaritaanka Carruurnimada Hore (da'da 3-5)
Sida loo Diiwaangeliyo Dugsi-horaadleyda iyo Sahaminta Yaryar
Aquatics (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Hawlaha Dugsiga Kahor
Naadiga Baadhayaasha ee Daryeelka Carruurta
Abaalmarinta Dhallinyarada Daryeela
Xeryaha Xagaaga ee 2021
ABE / ELL
Kobcinta dadka waaweyn
Jimicsiga Dadka Waaweyn iyo Madadaalada
Gargaarka Koowaad & CPR
Mashruuca SOAR (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Tonka Trail Trot - Meey 6, 2021
Firecracker Run - Julaay 4, 2021
Minnewashta Mud Run - Julaay 10, 2021
Tour de Tonka - Ogosto 7, 2021
Fall de Tonka - Sebtember 26, 2021
Baadhitaanka Carruurnimada Hore ayaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'doodu tahay dugsiga barbaarinta (da'doodu tahay saddex illaa shan jir), ka hor intaanay gelin dugsiga dadweynaha. Waxaad baaritaankaaga ka heli kartaa Minnetonka Community Education (eeg tilmaamaha hoose) ama waxaad noo soo diri kartaa natiijooyinka baaritaanka la dhammeeyay haddii aad mid hore ugu dhammaystirtay mid ka mid ah ilmahaaga meel kale.
Waa hubin bilaash ah oo fudud oo ku saabsan sida ilmahaagu u korayo una korayo, waxaana loo qaabeeyey inay ku jiraan ciyaaro xiiso leh oo qiimeyn doona aagag badan oo ka mid ah caafimaadka iyo horumarka ilmahaaga, oo ay ka mid yihiin:
Aragtida, maqalka iyo koritaanka jirka
Caafimaadka iyo taariikhda tallaalka
Horumarinta bulshada iyo shucuurta
Awooda guud iyo tan guud
Hadal, af iyo hadal
Baadhitaanku wuxuu taageeraa u diyaargarowga ilmahaaga ee xanaanada caruurta wuxuuna kobciyaa natiijooyinka wanaagsan ee koritaanka. Baadhitaanku wuxuu sidoo kale horseedi karaa gudbin loogu talagalay fursadaha waxbarashada hore. Baaritaanku ma aha imtixaanka gelitaanka xanaanada carruurta. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Xeerka Minnesota halkan .
UJEEDDO DAMIIR AH
Haddii waalidku yahay mid diidmo damiir ka qaba barnaamijka baaritaanka ilmahooda, canuggu uma baahna inuu ka qaybqaato. Waalidku waa inuu buuxiyaa Foomkan Diidmada Damiirka leh oo u gudbiyaa degmada. Wixii macluumaad dheeraad ah, akhri Xeerarka Minnesota, qaybta 121A.16-19 iyo Xeerarka Minnesota, qeybta 3530.3000-4310 .
SIDEE LOO DAWEEYAA MAGACA MAGAALADA
Si aad u ballansatid ballan baaris, fadlan iska qor halkan
Xulo taariikh iyo saacad ku shaqeysa jadwalkaaga oo xulo “Isdiiwaangeli Hada”
Dhamaystir dhammaan macluumaadka la codsaday oo xulo "Isdiiwaangeli"
Bogga xiga waa Dambiisha Dukaameysiga. Guji "Check out for $ 0"
Haddii diiwaangelintaadu guuleysato, waxaad heli doontaa xaqiijin deg deg ah oo emayl ah oo ay ku jiraan taariikhda iyo waqtiga baaritaankaaga. .
Haddii aadan helin e-mayl xaqiijin ah, fadlan wac Karla Sundem lambarka (952) 401-6840 si aad u hubiso in diiwaangelinta si habboon loo helay.
Waxaad heli doontaa wicitaan taleefan oo xusuusin ah usbuuca ballantaada si loo xaqiijiyo ballantaada oo aad uga jawaabto wixii su'aalo ah ee aad qabtid baaritaanka ka hor.
DUKUMENTIYADA LOO BAAHAN YAHAY:
Laba dukumiinti ayaa loo baahan yahay waqtiga baaritaanka si loo buuxiyo diiwaanadeena:
Nuqul ka mid ah shahaadada dhalashada ilmahaaga.
Haddii aad u baahan tahay inaad codsato nuqul cusub oo ah shahaadada dhalashada ilmahaaga:
Carruurta ku dhalatay Minnesota , booqo Xarunta Adeegga ee Ridgedale oo ku taal 12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, si aad u codsato nuqul. Waxa kale oo aad ka gali kartaa khadka tooska ah ee shabakadda www.hennepin.us , ama wac (612) 348-8240 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Carruurta ku dhasha meel ka baxsan Minnesota , booqo www.vitalchek.com si aad u hesho shahaadada dhalashada.
Diiwaanka tallaalka ilmahaaga ee la cusbooneysiiyay .
Fadlan u keen dukumiintiyadan ballanta baaritaanka ilmahaaga, ama u soo gudbi nuqulo kahor ballanta ballanta:
Email: Karla.sundem @ minnetonkaschools.org
Fakis: (952) 401-6805
Boostada: Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
ATTN: Karla Sundem
4585 Vine Hill Road, Excelsior 55331
MAGACA MAGACA BARNAAMIJKA:
Ugu dambayntii qiyaastii 45-60 daqiiqo.
Hubi cunuga hadalkiisa, mootadiisa, garashadiisa, xirfadaha bulshada iyo shucuurta, oo ay weheliso dhererka, culeyska, maqalka, aragga iyo taariikhda talaalka.
Ka qayb qaado nashaadaad ciyaaro oo ka dhigaya waayo-aragnimo farxad u leh carruurta, iyadoo la siinayo macluumaad qiimo leh shaashadda.
Waxaa loogu talagalay inay waalidiinta siiyaan macluumaad ku saabsan koritaanka ilmahooda da'da cunugga la baarayo. (Baaritaanka Carruurnimada Hore ma aha imtixaanka gelitaanka Xanaanada.)
Ka qaybgal waalidiinta wareysiga kooban si dib loogu eego habka baaritaanka, looga wada hadlo xirfadaha bulshada iyo shucuurta, lana wadaago wixii walwal ah ee ay qabaan. (Gudbinta waxaa loo samayn karaa ilaha waxbarasho ee dheeraadka ah ama adeegyada bulshada.)
FIIRO GAAR AH :
Waalidiinta waa loo ogol yahay inay la joogaan ilmahooda inta baaritaanka la sameynayo. (Baarayaasha waxay siin doonaan tilmaamo waalidiinta qolalka baaritaanka.)
Si loo ilaaliyo waxyaabaha jeediya wax yar, walaalaha kuma jiri karaan qolalka baaritaanka. Fadlan daryeel kale u raadso walaalaha.
Goobta Baaritaanka Carruurnimada Hore
Kaaliyaha Xafiiska Baadhista Carruurnimada Minnetonka
Goobta Maamulka ee Baaritaanka Carruurnimada Hore
4584 Vine Hill Wadada
Eeg jadwalka baaritaanka
aan la qeexin